Miss Universe Myanmar 2015 နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – Gentleman Magazine
2013 မှာ Miss People ပြိုင်ပြီးအနုပညာလောကထဲဝင်လာပါတယ်။ ငယ်ငယ်ထဲကလူအရမ်းကြောက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ စိတ်ကိုသဘောမကျခဲ့လို့ကိုယ်ကိုကိုယ် Confidence ရှိအောင်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအနုပညာလောက ထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအနုပညာအလုပ်တွေကိုနည်းနည်းပဲလက်ခံထားပါတယ်။
လက်ရှိတော့ Miss Universe 2015 ပွဲကလဲနီးနေပြီဆိုတော့ အဲဒီ့ဘက်ကိုပဲ အာရုံစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်အဆင်မပြေတာတွေရှိရင် ကိုယ်အတွက်အဆင်ပြေမှုတွေလာတော့မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှအမြဲတမ်းကံမဆိုးနေသလို အမြဲတမ်းကံလဲမကောင်းနေပါဘူးလေ။
အလုပ်အားနေတဲ့ အချန်တွေမှာ တော့ အိမ်မှာပဲ အေးဆေးနေဖြစ်တယ်။ TV ကြည့်တယ်။ တခါတလေ ခရီးထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက်က GYM ကိုနေစဉ်သွားတယ်။ အစားအသောက်တွေကိုဂရုစိုက်ပြီးစားဖြစ်ပါတယ်.
ဘဝမှာ အလေးစားဆုံးလူကတော့ အမေပါ။ ကိုယ်အတွက်အရာရာကိုသင်ကြားပြသပေးသလို ကျွန်မရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလဲ ကျွန်မထက်မြင်တယ်။ အမေက ကျွန်မရဲ့ အားနည်းချက်တွေ ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အမြဲ လမ်းပြပေး အားပေးနေလို့ အခုလို ရပ်တည်နိုင်တာပါ။
အပြင်သွားရင် မရှိမဖြစ် ပါရမယ့် ပစ္စည်းတွေက တော့ ဖုန်း နဲ့ မျက်မှန်ပါ။
သဘောကျတဲ့ ယောကျာ်း မျိုးက . . .
ပြင်ပသွင်ပြင်.စိတ်ဆိုတာက အပြင်ပိုင်းကိုကြည့်တာနဲ့မသိနိုင်ဘူးလေ။ နားလည်မှု၊ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ပြီး ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသား ရှိပြီး ကိုယ်အပေါ်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့သူ မျိုး ကို သဘောကျပါတယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်က တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ် . ညှာတာမှုမရှိ. သစ္စာမရှိဘူး ဆိုရင် တော့ ယောကျာ်း ကောင်းလုံး ဝမပီသတော့ပါဘူး။
အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်များ အတွက် . . .
အမြဲတမ်း Facebook တော့သုံးပါတယ်။ MayBarani Thaw နာမည် နဲ့ ရှာကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Fan တွေကို လည်း အားပေးတဲ့ အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲနီးလာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေသိပ်မလုပ်ဖြစ်တာ Sorry ပါ။ ဆက်ပြီးအားပေးပါဦးနော်။
Miss Universe Myanmar 2015 နှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး
2013 မှာ Miss People ပွိုငျပွီးအနုပညာလောကထဲဝငျလာပါတယျ။ ငယျငယျထဲကလူအရမျးကွောကျခဲ့တယျ။ အဲ့ဒီ စိတျကိုသဘောမကခြဲ့လို့ကိုယျကိုကိုယျ Confidence ရှိအောငျပွိုငျပှဲတှဝေငျပွိုငျခဲ့ပွီးအနုပညာလောက ထဲကိုစတငျဝငျရောကျခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိအနုပညာအလုပျတှကေိုနညျးနညျးပဲလကျခံထားပါတယျ။
လကျရှိတော့ Miss Universe 2015 ပှဲကလဲနီးနပွေီဆိုတော့ အဲဒီ့ဘကျကိုပဲ အာရုံစိုကျဖွဈပါတယျ။
ကိုယျအဆငျမပွတောတှရှေိရငျ ကိုယျအတှကျအဆငျပွမှေုတှလောတော့မယျလို့စဉျးစားလိုကျပါတယျ။ ဘယျအရာမှအမွဲတမျးကံမဆိုးနသေလို အမွဲတမျးကံလဲမကောငျးနပေါဘူးလေ။
အလုပျအားနတေဲ့ အခနျြတှမှော တော့ အိမျမှာပဲ အေးဆေးနဖွေဈတယျ။ TV ကွညျ့တယျ။ တခါတလေ ခရီးထှကျဖွဈပါတယျ။
ကနျြးမာရေးအတှကျက GYM ကိုနစေဉျသှားတယျ။ အစားအသောကျတှကေိုဂရုစိုကျပွီးစားဖွဈပါတယျ.
ဘဝမှာ အလေးစားဆုံးလူကတော့ အမပေါ။ ကိုယျအတှကျအရာရာကိုသငျကွားပွသပေးသလို ကြှနျမရဲ့အားနညျးခကျြတှကေိုလဲ ကြှနျမထကျမွငျတယျ။ အမကေ ကြှနျမရဲ့ အားနညျးခကျြတှေ ကို ပွုပွငျပွောငျးလဲဖို့ အမွဲ လမျးပွပေး အားပေးနလေို့ အခုလို ရပျတညျနိုငျတာပါ။
အပွငျသှားရငျ မရှိမဖွဈ ပါရမယျ့ ပစ်စညျးတှကေ တော့ ဖုနျး နဲ့ မကျြမှနျပါ။
သဘောကတြဲ့ ယောကျြား မြိုးက . . .
ပွငျပသှငျပွငျ.စိတျဆိုတာက အပွငျပိုငျးကိုကွညျ့တာနဲ့မသိနိုငျဘူးလေ။ နားလညျမှု၊ကိုယျကငျြ့တရား ကောငျးမှနျပွီး ခဈြတတျတဲ့နှလုံးသား ရှိပွီး ကိုယျအပျေါဦးဆောငျနိုငျတဲ့သူ မြိုး ကို သဘောကပြါတယျ။
ယောကျြားတဈယောကျက တဈကိုယျကောငျးဆနျတယျ . ညှာတာမှုမရှိ. သစ်စာမရှိဘူး ဆိုရငျ တော့ ယောကျြား ကောငျးလုံး ဝမပီသတော့ပါဘူး။
အားပေးတဲ့ ပရိတျသတျမြား အတှကျ . . .
အမွဲတမျး Facebook တော့သုံးပါတယျ။ MayBarani Thaw နာမညျ နဲ့ ရှာကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
Fan တှကေို လညျး အားပေးတဲ့ အတှကျအမြားကွီးကြေးဇူးတငျပါတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ ပွိုငျပှဲနီးလာတော့ အနုပညာအလုပျတှသေိပျမလုပျဖွဈတာ Sorry ပါ။ ဆကျပွီးအားပေးပါဦးနျော။
Previous: Facebook ပေါ်မှာ ရှောင်သင့်တဲ့ မိန်းမ ၁၀ မျိုး
Next: လူအများကို လွှမ်းမိုးနိုင်သူများ ၏ တွေးခေါ်ပုံ တွေးခေါ်နည်း